अग्नि सापकोटाका छोरामा आगो खोई ?
नेकपाको सरकारले पार्टीका नेताका छोरा रुपक सापकोटालाई परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानको उपकार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको छ । रुपक चीनमा पढेका र योग्य व्यक्ति होलान्, प्रश्न के पनि छ भने उनीभन्दा अरु पनि झन बढी योग्य थिए कि ? किन नेताकै छोरालाई यो पद दिइयो ? कतै सत्ताको दुरुपयोग त होइन ? भन्ने प्रश्न पनि छ ।
यो संस्था परराष्ट्र मामिलामा थिंक टेंक मानिन्छ, थिंक टेंकमा युवाको नियुक्ती स्वागतयोग्य निर्णय हो । प्रश्न केमात्र हो भने नेकपाको नेताको छोराले नेकपाको सरकारले गरेका गलत परराष्ट्र नीति र सुरक्षाका सम्बन्धमा कडा खालको निर्णयको विरुद्धमा नीतिगत विचार दिन सक्लान् ?
प्रम केपी ओलीले यो संस्थामा गृहमन्त्री भएकै बेला एक महिलालाई लगेका थिए, ती महिला यतिबेला राजदूत बनेकी छिन् । तिनै ओलीले अहिले आफ्नै पार्टीका नेताका छोरालाई नियुक्त गरेका छन् । जनताका छोराले नियुक्ती पाउनु हुन्न ? नेकपाका नेता वा तिनका सन्तानमात्र जता पनि योग्य हुन्छन् ? यो प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा राजेश श्रेष्ठ छन्, उनी पनि चोखा छैनन् ।
हो, रुपक चिनियाँ विश्वविद्यालयबाट ‘चीन–भारत–नेपाल त्रिदेशीय सम्बन्ध’ मा विद्यावारिधी हासिल गरेका युवा हुन् । त्यसो हो भने सन २०१५ मे १५ मा नेपालको लिपुलेकबाट चीन र भारतले व्यापार गर्न गरेको सम्झौताबारे उनको विचार के हो ? अहिले भारतले कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्मको ३७४ बर्गमाइल नेपाल िभूभाग आफ्नो नक्सामा हालिसक्यो । यससम्बन्धमा यिनले परराष्ट्र र प्रधानमन्त्रीलाई दिने सुझाव के के हुन् ? यिनी किन सीमाविद, विशेषज्ञहरुसँग सम्पर्कमा छैनन् ?
आमनागरिक सडकमा छन् । युवा, बुद्धिजीवी, नागरिक समाज उद्वेलित भएका छन् । खुकुरीमा धार हाल्ने कुरा गरिरहेका छन् । यी युवा विज्ञले पद पाए, सुविधा पाएका छन् र यिनले नेपालको सन्दर्भमा अहिले गरिहाल्नुपर्ने, पछि के के गर्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा के कस्तो सुझाव दिएका छन् सरकारलाई, जनताले थाहा पाउनु पर्दैन ? अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जानका लागि के के प्रमाण जुटाउनु पर्छ, राष्ट्रसंघमा यो मामिला जानकारी गराउने कि नगराउने ? यसबारेमा यी युवा किन बोल्दैनन् ?
यिनले केही लेख, विचारहरु प्रकाशित गराएका छन् । ती त्यत्ति खारिएका र माझिएका मानिदैनन् । अव पदमा पुगेका छन् र पदमा बसेर उनले गर्ने काम र दिने सुझाव सरकारका लागि महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । जनताको भावना उनका सुझावमा देखिनुपर्छ, लेखिनुपर्छ । सुझाव संकलन गरेर संविधानमा नलेखिएजस्तो भयो भने यी युवाले पाएको अवसर नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यजनक हुनजानेछ । यिनले बाबु नेकपाको नेता भएकै कारण पाएको पदीय बक्सिस ठहरिनेछ । यो उनको बिरोध होइन, उनीसँग राष्ट्र र जनताले गरेको अपेक्षा हो, चेतना रहोस् युवा ।